Arsenal Oo Doonaysa Di Maria, Pedro Rodriguez Iyo Cuadrado Mid Kood.
Kooxda Arsenal ayaa indhaha ku haysa laacib xawaare dheereeya oo ka ciyaara garab waxayna si aad ah u doonayaan laacib ka kooxda Real Madrid Di Maria, Kan Barcelona Pedro iyo laacibka kooxda Fiorentina Cuadrado.
Daily Mirror ayaa shaacisay in tababaraha Arsenal Arsene Wenger uu suuqa ugu jiro sidii uu ku heli lahaa 3daas laacib mid ka mid ah suuqa kala iibsiga ee xaggaaga.
Marca ayaa dhankeeda shaacisay in tababaraha Arsenal uu si aad ah u doonayo laacib ka kooxda Real Madrid Di Maria isagoo doonaya inuu ka gudbiyo dalab qaali ah lakiin Wenger ayaa og in Real aysan sifudud uga iibin doonin laacibka ree Argentina taas oo keenaysa inuu xiisihiisa u wareejiyo Pedro Rodriguez iyo Cuadrado.
Daily Mirror ayaa intaa ku dartay in Arsenal ay ku dhawdahay saxiixa laacibka garabka uga ciyaara Fiorentina Cuadrado inay ku soo gaba gabayso 20 milyan oo euro.
Ciroole Ma Ahan Waa Caruur: Joseph Minala Oo La Xaqiijiyay Inuu Yahay 17 Sanno Jir.
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Lazio Joseph Minala kama uusan been sheegin da’diisa, sidaasi waxaa lagu yiri baaritaan rasmi ah oo ay sameysay xiriirka kubada cagta Talyaaniga FIGC.
Website kubada cagta ka faalooda oo Afrika ka soo baxa ayaa sheegay bishii Febraayo in xiddiga reer Cameroon Minala inuu yahay 42 sanno jir laakiin uu sheegtay 17 sanno jir.
Eedeymahaas ayaa keenay in baaritaan la sameeyo oo uu qareen xiriirka kubada cagta Talyaaniga ah soo rogo.
Minala ayaa ku biiray kooxda ka dhisan magaalada Rome xagaagii hore, waxaana uu u ciyaaray koobka da’ yarta ee Viareggio Cup bishii Febraayo.
Paul Scholes: England Waa Inay U Ciyaarto Sida Liverpool Koobka Adduunka.
Halyeeyga Manchester United Paul Scholes ayaa ugu baaqay tababaraha England Roy Hodgson inuu England u ciyaarsiiyo sida ay u ciyaarto Liverpool marka ay tagaan Koobka Adduunka ee Brazil.
Scholes ayaa sheegay in qaab ciyaareedkii wanaagsanaa ee xilli ciyaareedkan ay soo bandhigtay Liverpool inay soo xusuusisay Man United oo waqtigeedii ugu fiicnaa ku jirtay.
“Waxa ay ahaan laheyd wax cusub oo xiiso leh in England ay dhaqangeliso qaabka kubad ee weerar ee Liverpool” ayuu yiri Scholes.
“Taasina waxa ay la micno tahay afar ama suurtogalnimada dhan ciyaaryahan oo Liverpool ah inay ku jiraan line-upka.”
Liverpool ayaa sarre u soo kacday xilli ciyaareedkii dhamaaday iyadoo kooxda Brendan Rodgers ay horyaalka ka dhalisay 101 gool halka uu si ciriiri ah kaga baxsaday koobka horyaalka oo ay qaaday Manchester City.
Chelsea Oo Ku Dhow Inay La Soo Wareegto Seddex Ciyaaryahan Oo Atletico Madrid Ah.
Chelsea ayaa ku dhow inay dhameystirto seddex heshiis ay kula soo wareegeyso seddex ciyaaryahan oo u ciyaara Atletico Madrid kuwaasoo qiimahooda uu ku kacayo 51 milyan ginni islamarkaana ay kala yihiin Diego Costa, Filipe Luis iyo Tiago.
Wadahadalada lagula wareegayo Diego Costa oo ah 32 milyan ginni ayaa ku dhow in la dhameystiro sida ay sheegeyso The Times, halka ay kooxda sidoo kale dooneyso inay bixiso lacagta lagu burburin karo qandaraaska Luis oo gaareysa 19 milyan ginni.
Tiago oo isna 33 jir ah islamarkaana ka soo hoos ciyaaray tababare Jose Mourinho markii uu joogay Chelsea oo uu qaaday Premier League 2004-05 uu isna xor u yahay inuu ku biiro kooxdii uu doono xagaaga soo socda.
Mourinho Ayaan qarsanin inuu u baahan yahay gooldhaliye, iyadoo Samuel Eto’o la fasaxay halka Fernando Torres uu isna raadinayo meel uu ka aado Stamford Bridge.
Chelsea ayaa sidoo kale u baahan daafac bidix ka dib markii Ashley Cole uu ku dhawaaqay inuu ka tagayo kooxda ka dib sided sanno uu joogay.
Cesar Azpilicueta ayaa waqti badan ku qaatay xilli ciyaareedkii hore inuu buuxiyo booska Cole laakiin Mourinho ayaa mudada dheer u arka daafac midig, waxaana si aad ah loola xiriirinayay Luis, daafaca Sevilla Alberto Moreno iyo xiddiga Southampton Luke Shaw.
RASMI: Goolhayihii Arsenal Fabianski Oo Ku Biiray Swansea.
Swansea City ayaa la soo wareegtay goolhaye Lukasz Fabianski kaasoo si xor ah uga soo wareegay Arsenal.
Goolhayaha reer Poland ayaa todoba sanno ku qaatay Emirates, waxaana uu ciyaaray finalka FA Cup ee ay Arsenal ka qaaday Hull City horaantii bishaan.
Fabianski ayaa u saxiixay kooxda reer Wales heshiis afar sanno ah.
29 jirkaan ayaa noqonaya saxiixii ugu horeysay ee tababare Garry Monk tan iyo markii uu Swansea u noqday macalin.
Samuel Eto’o Oo Doonaya Inuu Ku Biiro Arsenal Si Uu Uga Aarsado Mourinho.
Samuel Eto’o ayaa doonaya inuu ku biiro Arsenal xagaagan, si uu u dareensiiyo Mourinho inuu qaldan yahay, madaama uu goor sii horeysay shaki geliyay da’diisa, sida ay qortay Daily Mirror.
Wakiilada Eto’o ayaa xiriir la sameeyay Arsenal iyagoo ku wargeliyay in xiddiga reer Cameroon si xor ah lagula wareegi karo xagaaga. Waxa ay u cadeeyeen in Eto’o uu doonayo inuu u dhaqaaqo Emirates, islamarkaana ay taasi tahay muhiimadiisa koowaad.
Arsenal ayaa dooneysa inay xoojiso weerarkeeda, waxaana ay ku dhow yihiin inay heshiis la gaaraan xiddiga Real Madrid Alvaro Morata laakiin kooxda reer Spain ayaa ku adkeysaneysa inay dooneyso inay dib u soo iibsato xiddigaan.
Laakiin Arsenal ayaa u baahan in ka badan hal weeraryahan, Eto’o oo 33 jir ah ayaana buuxin kara booskaas ka dib markii uu ka carooday shakigii uu Mourinho geliyay da’diisa mar sii horeysay xilli ciyaareedkii dhamaaday.
Mourinho ayaa la duubay isagoo sheegaya in Eto’o uu xaqiiq ahaan ka weyn yahay da’da uu sheeganayo.
Alvaro Morata Oo Ku Soo Laabtay Raadaarka Arsenal.
Madaxda Arsenal ayaa u duulay Spain iyagoo rajeynaya inay heshiis ka gaaraan saxiixa xiddiga Real Madrid Alvaro Morata, sida ay ku warameyso Daily Mail.
Weeraryahanka ayaa muddo dheer diirada u saarnaa Arsene Wenger, kooxda ayaana u dhaqaaqday 21 jirkaan xilli hore kaasoo sidoo kale diirada u saran Juventus.
Madrid ayaa diyaar u ah inay iska iibiso ciyaaryahanka, laakiin waxa ay doonayaa in heshiis walba lagu darro sharuud ah inay dib u soo iibsan karaan marka uu xiddig magic leh noqdo islamarkaana ku helaan qiimo jaban.
Arsenal ayaa isku dayday inay xiddiga reer Spain amah kula soo wareegto xagaagii hore, waxaana balanqaadka Arsenal ee ah inay boos joogta ah siineyso ay keeni kartaa inuu u soo dhaqaaqo Emirates.
Morata ayaa dhaliyay sagaal gool 28 kulan uu u saftay Real xilli ciyaareedkan, waxaana uu bedel ku soo galay finalkii Champions League isagoo ka caawiyay guushii ay ka gaareen Atletico Madrid.
Gunners ayaa sidoo kale xiiseyneyso weeraryanaka Real Karim Benzema laakiin Carlo Ancelotti ayaa doonaya in xiddiga reer France uu saxiixo qandaraas cusub.